हिमाल खबरपत्रिका | ‘एकपटक जुम्ला आइदिनुस्’
‘एकपटक जुम्ला आइदिनुस्’
२९ भदौमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजुवाल भन्छिन्, “लगानीकर्ताका लागि जुम्लामा प्रशस्तै सम्भावना छन्।”
चन्दननाथमा लगानी सम्मेलन गर्ने सोच कसरी आयो ?
चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले हाम्रो नगरपालिकालाई पर्याप्त बजेट दिएन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ, आम अपेक्षा चुलिएका छन् । यस्तो बेला स्थानीय सरकार अनुदानकै भरमा चलाउन सकिंदैन । फेरि त्यो संघीयताको मर्म विपरीत पनि हो । त्यसैले लगानीकर्तालाई चन्दननाथसम्म ल्याउन, यस क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो । स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै समग्र जुम्लाको विकास हाम्रो उद्देश्य हो ।
चन्दननाथ नगरपालिकामा लगानीका कस्ता अवसर छन् ?
कृषि, पर्यटन र जडीबुटीमा समग्र कर्णाली प्रदेशमा धेरै अवसर छन् । उच्च हिमाली भेकमा उत्पादन हुने अन्नबाली, फलफूल र जडीबुटीमा आधारित उद्योगका लागि ठूलो अवसर छ । पर्यटनका क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्रदूषण भइनसकेको क्षेत्र हो, यो । मुख्य कुरा लगानीकर्ता पहिले जुम्ला आउनु पर्‍यो । उहाँहरुले हामीभन्दा धेरै बढी अवसर पहिचान गर्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
लगानीकर्तालाई नगरपालिकाले कसरी आकर्षित गर्दैछ ?
हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा लगानीकर्तालाई पूर्ण सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौं । त्यसैगरी आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिरका विषयमा पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने छौं । हामीले लगानी सम्मेलन मार्फत पहिलो चरणमा लगानीकर्ताको चासो जान्न खोजेका छौं ।
भौतिक पूर्वाधारमा कमजोर कर्णालीमा लगानी गर्दा प्रतिफलको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ?
विगतको तुलनामा कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधारमा निकै सुधार भएको छ । उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन अब गाह्रो छैन । त्यसमा कतै अप्ठ्यारो भए सहयोगका लागि नगरपालिका तयार छ ।
सम्मेलन आयोजनाका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य भएको छ ?
केन्द्र र प्रदेश सरकारका साथै लगानी बोर्ड, नगर विकास बोर्डसँगको सहकार्यमै सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हौं । केन्द्र सरकारका अर्थमन्त्री सम्मेलनको प्रमुख अतिथि हुनुहुनेछ । उहाँले केन्द्र सरकारका तर्फबाट लगानीकर्तालाई केही सहुलियतको घोषणा गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।